Apple ID Account ကို အပြီးဖျက်တော့မယ်ဆိုရင် | MyTech Myanmar
ဒီနေ့မှာတော့ Apple သမားလေးတွေအတွက် Tips လေးတွေ ပြောစရာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ iPhone မှာဆို ဖုန်းဝယ်ပြီးတာနဲ့ Apple ID လုပ် သွင်းချင်တာသွင်း ဒေါင်းချင်တာဒေါင်း အမြဲလုပ်ကြပါတယ်။
တကယ်လို့များ ကိုယ့်အကောင့်အပြင်နောက်ထပ်၁ကောင့်ရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် Apple ID အကောင့်ကို အပြီးဖျက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းလေးကို အရင်ဖတ်ကြည့ပါ။
Apple ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ Apple ID အကောင့်ကို ခဏ Deactivate လုပ်တာ အပြီးဖျက်တာ ကြိုက်ရာရွေးခွင့်ပေးထားပါတယ်။ Apple ရဲ့ Data & Privacy Laws အရ အကောင့်ကို ဖျက်တော့မယ်ဆို ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ? အကောင့်ဖျက်လိုက်ပြီဆိုရင်
ကိုယ့် iTunes Store, Apple Books, App Store Purchase တွေ လုံးဝသုံးလို့ မရတော့ပါဘူး။
iCloud ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေနဲ့ ဖိုင်တွေအကုန် အပြီးပျက်သွားပါမယ်။
iMessage, FaceTime, iCloud Mail တို့ကနေ အကောင့်ဆီပို့လာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျမှန်သမျှ မရတော့ပါဘူး။
iCloud, iTunes, Apple Books, App Store, Apple Pay, iMessage, FaceTime, Find My iPhone စတာတွေအကုန်လုံးကို Sign-in လုပ်လို့မရ သုံးလို့လည်း မရတော့ပါဘူး။
တစ်ချို့ချွင်းချက်ဒေတာလေးတွေ လွဲပြီး ကျန်တဲ့ Apple Service နဲ့ဆိုင်သမျှ ဒေတာအားလုံး ပျက်ပါမယ်။
iPhone Upgrade Program မှာဝင်ထားရင်တော့ ဖုန်းအတွက် ငွေပေးချေမှုတွေ ဆက်လုပ်လို့ရပါတယ် (ဒီမှာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး)
အကောင့်ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက် Apple Store Ordrers တွေ Repairs တွေအကုန် Cancel ဖြစ်မသွားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Apple Store မှာ ချိန်းထားတဲ့ ရက်ချိန်းတွေကတော့ အကုန် Cancel ဖြစ်သွားပြီး အကောင့်ဖျက်လိုက်တာနဲ့ Apple Care နဲ့ကိစ္စမှန်သမျှ အပြီး ပိတ်သွားပါမယ်။
ဒါတွေက အကောာင့်ဖျက်လိုက်ရင် ဖြစ်မယ့်အချက်လေးတွေပါ။
အကောင့်ကို Deactivate မလုပ်ချင်ဘူး မဖျက်ချင်ဘူးဆိုရင် Apple ID Email Address ကို ပြောင်းပါ။
၁. Apple ရဲ့ Data and Privacy Webpage ကို Login ဝင်ပါ။
၂. ကိုယ်ဖျက်ချင်တဲ့အကောင့်ကို Login ဝင်ပါ။
၃. အောက်နားသွားပြီး Request To Delete Your Account ကို နှိပ်ပါ။
၄. ဖျက်ချင်တာသေချာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ Data Backup တွေကို ၂ခေါက်သေချာပြန်စစ်ပါ။
၅. Apple ID နဲ့ Subscription လုပ်ထားတာတွေရှိလား ပြန်စစ်ပါ။
၆. အကောင့်ဖျက်ချင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ရွေးပြီး “Continue” ကို နှိပ်ပါ။
၇. Apple ID အကောင့် အပြီးဖျက်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့ Prompt လေးတွေကို လိုက်လုပ်လိုက်ပြီးရင် ရပါပြီ။
ဒါဆိုရင်တော့ အကောင့်တစ်ခုကို အပြီးပိုင်ဖျက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေး သိပြီထင်ပါတယ်။ တော်တော်များများလည်း သိဖူးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ နောက်ထပ် Tips & Tricks လေးတွေလည်း လာဦးမှာ ဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ပေးကြဖို့ မျှော်လင့်ရင်း…
ဒီနမှေ့ာတော့ Apple သမားလေးတှအေတှကျ Tips လေးတှေ ပွောစရာရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ iPhone မှာဆို ဖုနျးဝယျပွီးတာနဲ့ Apple ID လုပျ သှငျးခငျြတာသှငျး ဒေါငျးခငျြတာဒေါငျး အမွဲလုပျကွပါတယျ။
တကယျလို့မြား ကိုယျ့အကောငျ့အပွငျနောကျထပျ၁ကောငျ့ရှိနတောပဲဖွဈဖွဈ ဘာအကွောငျးကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ Apple ID အကောငျ့ကို အပွီးဖကျြတော့မယျဆိုရငျ ဒီအကွောငျးလေးကို အရငျဖတျကွည့ပါ။
Apple ကိုယျတိုငျကလညျး ကိုယျ့ရဲ့ Apple ID အကောငျ့ကို ခဏ Deactivate လုပျတာ အပွီးဖကျြတာ ကွိုကျရာရှေးခှငျ့ပေးထားပါတယျ။ Apple ရဲ့ Data & Privacy Laws အရ အကောငျ့ကို ဖကျြတော့မယျဆို ဘာတှဖွေဈနိုငျမလဲ? အကောငျ့ဖကျြလိုကျပွီဆိုရငျ
ကိုယျ့ iTunes Store, Apple Books, App Store Purchase တှေ လုံးဝသုံးလို့ မရတော့ပါဘူး။
iCloud ထဲမှာ သိမျးထားတဲ့ ပုံတှေ ဗီဒီယိုတှနေဲ့ ဖိုငျတှအေကုနျ အပွီးပကျြသှားပါမယျ။
iMessage, FaceTime, iCloud Mail တို့ကနေ အကောငျ့ဆီပို့လာတဲ့ မကျဆခြေျ့မှနျသမြှ မရတော့ပါဘူး။
iCloud, iTunes, Apple Books, App Store, Apple Pay, iMessage, FaceTime, Find My iPhone စတာတှအေကုနျလုံးကို Sign-in လုပျလို့မရ သုံးလို့လညျး မရတော့ပါဘူး။
တဈခြို့ခြှငျးခကျြဒတောလေးတှေ လှဲပွီး ကနျြတဲ့ Apple Service နဲ့ဆိုငျသမြှ ဒတောအားလုံး ပကျြပါမယျ။
iPhone Upgrade Program မှာဝငျထားရငျတော့ ဖုနျးအတှကျ ငှပေေးခမြှေုတှေ ဆကျလုပျလို့ရပါတယျ (ဒီမှာတော့ မဟုတျသေးပါဘူး)
အကောငျ့ဖကျြလိုကျတဲ့အတှကျ Apple Store Ordrers တှေ Repairs တှအေကုနျ Cancel ဖွဈမသှားပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Apple Store မှာ ခြိနျးထားတဲ့ ရကျခြိနျးတှကေတော့ အကုနျ Cancel ဖွဈသှားပွီး အကောငျ့ဖကျြလိုကျတာနဲ့ Apple Care နဲ့ကိစ်စမှနျသမြှ အပွီး ပိတျသှားပါမယျ။
ဒါတှကေ အကောာငျ့ဖကျြလိုကျရငျ ဖွဈမယျ့အခကျြလေးတှပေါ။
အကောငျ့ကို Deactivate မလုပျခငျြဘူး မဖကျြခငျြဘူးဆိုရငျ Apple ID Email Address ကို ပွောငျးပါ။
၁. Apple ရဲ့ Data and Privacy Webpage ကို Login ဝငျပါ။
၂. ကိုယျဖကျြခငျြတဲ့အကောငျ့ကို Login ဝငျပါ။
၃. အောကျနားသှားပွီး Request To Delete Your Account ကို နှိပျပါ။
၄. ဖကျြခငျြတာသခြောပွီဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ Data Backup တှကေို ၂ခေါကျသခြောပွနျစဈပါ။
၅. Apple ID နဲ့ Subscription လုပျထားတာတှရှေိလား ပွနျစဈပါ။
၆. အကောငျ့ဖကျြခငျြရတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခု ရှေးပွီး “Continue” ကို နှိပျပါ။
၇. Apple ID အကောငျ့ အပွီးဖကျြဖို့အတှကျကနျြတဲ့ Prompt လေးတှကေို လိုကျလုပျလိုကျပွီးရငျ ရပါပွီ။
ဒါဆိုရငျတော့ အကောငျ့တဈခုကို အပွီးပိုငျဖကျြလို့ရတဲ့နညျးလမျးလေး သိပွီထငျပါတယျ။ တျောတျောမြားမြားလညျး သိဖူးပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ နောကျထပျ Tips & Tricks လေးတှလေညျး လာဦးမှာ ဖွဈလို့ စောငျ့မြှျောပေးကွဖို့ မြှျောလငျ့ရငျး…
MyTech Myanmar2018-12-26T00:42:44+06:30December 26th, 2018|HowTo, Tips & Stories|